Tanjon’ny fikambanana | Human Rights in Masoala
Ny hampiharihary izay tsy rariny sedrain’ny mponina any Masoala amin’ny anaran’ny fikajiana ny tontolo iainana no tanjon’ny fikambanana «Human Rights in Masoala» (Zon’olombelona hoan’ny mponina any Masoala).
Notokanana tamin’ny taona 1997 ny valan-javaboahary izay mandrakotra ny atsasan’ny saikanosy Masoala amin’ny morontsiraka avaratra-atsinanan’i Madagasikara (jereo saritany), sady mandray fanohanana avy amin’ny sampandraharaha Amerikana sy Eorôpeana maro (isan’izany ny Wildlife Conservation Society sy ny Zoo de Zurich any Soisa). Amin’iny faritry ny valan-javaboahary Masoala. iny, dia marobe ireo tantsaha very tanindrazana. Very trano, very tanimbary sy tanivohitra nolovaina tamin-drazana, nohon’ny famaritana izay natao tamin’ny famoronana izany valan-javaboahary Masoala izany. Nanana ny anjara-birikiny teo amin’ny harinkarena any amin’ny faritra iny ireo tany ireo ka ny fahaverezany dia vao mainka nanampy trotraka ny fahantrana izay efa nisy rahateo. Ny fihenan’ny tany azo vokarina amin’iny faritra iny dia loza mihantona hoan’ny famatsiana ara-tsakafo, tsy hoan’ny mponina ankehitriny ihany fa indrindra hoan’ireo taranaka handimby. «Añaty rôva izahay» (voageja toy ny gadra izahay) izany no ambeti-tenin’ny mponina ankehitriny hanambarany ny tsy fankasitrahany izany famaritana hoan’ny valan-javaboahary Masoala izany.
Manongilan-tsofina amin’izay fanaovana ampihy mamba ny tany lonak‘ireo tantsaha sy izay fanapahana sy fanondranana an-tsokosoko ny andramena izao tontolo izao. Na inona antony manakana ny tantsaha tsy ho afaka mamboly intsony: na fiarovana zava-boahary izany na fitrandrahana ekônomika, dia sahala ny fahavoazana hoan’ny mpamboly very tany.
Izahay fikambanana «Human Rights in Masoala» (Zon’olombelona hoan’ny mponina any Masoala) dia mijoro eo anilan’ireo tantsaha any Masoala mitaky ny zo azahoany miaina arak’izay heveriny ho fiainana mendrika, ary mitaky amin’ireo sampandraharaha mpiaro ny zava-boahary ny fiheverana sy ny fanajana izany zo izany. Tafiditra ao anatin’izay takiana ny tsy fanaovana ho tsinotsinona ireo zo nentim-paharazana arak‘izay voarakitry ny lovatsofina (jereo ny andininy faha-17, sy 22 ary 25 –n‘ny Fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona).
Raha sitrakareo ny hanohana izay tolona voizin’ny «Human Rights in Masoala» dia afaka miditra maimaim-poana ho mpikambana ianareo.
Raha mila fanazavana fanampiny mikasika ireo tanjona sy hetsika izay voizin’ny fikambanana mikatsaka ny zon’olombelona hoan’ny mponina any Masoala ianareo dia arahò ity rohy ity. Hoan’izay antsimpirihany mikasika an’i Masola kosa, azonareo vakiana ny vaovao apariaky ny fikambanana.
Rasin’ny Zon’olombelona hoan’ny mponina any Masoala ho azy ny ainga mifototra amin’ireto filamatra telo ireto dia ny: fanekena amim-pahaleovantena, amim-pahalalana feno, ary natao mialoha (Consentement Libre, Informé et Préalable)1
1. Tamin’ny taona 2004, ny Komision’ny Firenena Mikambana momba ny zon’olombelona no namaritra izay votoatin’ny heverina ambadiky ny hoe «fanekena amim-pahaleovantena, amim-pahalalana feno, ary natao mialoha»:
‘Free, prior and informed consent recognises Indigenous peoples’ inherent and prior rights to their lands and resources and respects their legitimate authority to require that third parties enter into an equal and respectful relationship with them, based on the principle of informed consent.’